Ny fanomezam-pahasoavan’ny hira
’’Ahoana ary no izy? Sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa aho; sady hihira am-panahy no hihira an-tsaina koa aho."-1 Kor. 14:15.
Miantso ny vahoakany mba hiditra amin'ny laharan' asa anompoana samihafa ny Tompo, ka hamafy eny akaikin' ny rano rehetra eny. Ampahany kely ihany no ataontsika amin'ny asa izay iriny hotanterahintsika amin'ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika sy amin'ireo namantsika. Afaka manana hery miasa mangina amin'ny mahantra, marary na ny namoy fianakaviana isika rehefa maneho hatsaram-panahy amin'izy ireo. Amin' izay dia hahita lalana hidirana ao am-pony ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy misy tombontsoa ho amin'ny fanompoana tahaka izany tokony havela handalo amin'izao foana kanefa tsy hatsaraina. Io no asa misionera ambony indrindra azontsika atao. Ny fanehoana ny fahamarinana amim-pitiavana sy amim-piraiketam-po dia mifandrindra tsara amin'ny torolalana nomen'i Kristy ny mpianany rehefa naniraka azy ireo ho amin'ny famangiana misionera voalohany Izy.
Ilaina ireo manana ny fanomezam-pahasoavan'ny hira. Ny hira no iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fampiraketana ny fahamarinana ara-panahy ao am-po. Ny teny voarakitra ao amin'ny hira masina matetika no manokatra ny loharanon'ny fibebahana sy ny finoana. Tokony hobeazina handeha hitory ny hafatra farany amin'izao tontolo izao ny mambran'ny fiangonana, na ny tanora na ny lehibe. Raha mandeha amim-panetren-tena izy ireo, dia hiaraka amin'izy ireo ny anjelin’Andriamanitra, hampianatra azy ireo ny fomba hanandratana ny feony ao anatin'ny vavaka, ny fomba hampiakarana ny feony ao anatin'ny hira, ary ny fomba hitoriana ny hafatry ny filazantsara amin'izao vanim-potoana izao.
Ry tanora lahy sy vavy, raiso ny asa izay niantsoan' Andriamanitra anareo. Hampianatra anareo ny fomba ampiasana ny fahaizanareo ho amin'ny tanjona tsara i Kristy. Rehefa mandray ny hery manosiky ny Fanahy Masina ianareo ka miezaka ny mampianatra ny hafa, dia ho afaka hamoaka teny vaovao sy hahafinaritra aoka izany ho an'ny mpihaino anareo ianareo. Mivavaha sy mihira, ary torio ny Teny. (...)
Tian'Andriamanitra ny handraisan'ny vahoakany mba hahafahan'izy ireo manome. Tokony hizara amin'ny hafa izay nomen'ny Tompo azy izy ireo, tahaka ny vavolombelona tsy mizaha tavan'olona sy tsy tia tena. Ary rehefa mirotsaka ao amin'ny asa ianao, ka miezaka ny hanatratra fo maro amin'ny fomba rehetra eo am-pelatananao, dia aoka ho azo antoka fa miasa amin'ny fomba izay manala ny hevitra mibahana ao an-doha rehetra ianao, fa tsy sanatria hampitsiry izany. Aoka hianatra mandrakariva ny fiainan'i Kristy ianao, dia miasa tahaka izay niasany, ary manaraha ny ohatra napetrany. — RH, 6 Jona 1902.